Muuri News Network » Farmaajo oo Fuliyay Balan uu ka qaaday Taliyeyaasha Saldhigyada Muqdisho oo …
Farmaajo oo Fuliyay Balan uu ka qaaday Taliyeyaasha Saldhigyada Muqdisho oo …
Kadib markii ciidamada Booliska Somaliya ay ka mid noqdeen dhalinyaro badan oo Jaamacadaha kala duwan ee dalka ka soo baxay, ayaa iyadoo la dhiiragelinaayo dhalinyaradaasi shaqada Booliska cusub, waxaa loo magacaabay Taliyeyaal Saldhigyada Booliska Gobolka Banaadir.
Laba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay dalka ee ku biirtay ciidanka Booliska Somaliyed, ayaa loo magacaabay Taliyeyaasha Saldhigyada Booliska Degmooyinka Shibis iyo Boondheere.
Taliska Booliska Gobolka Banaadir, ayaa magacaabay dhalinyarada, waxaana Laba Xidigle Cali Xasan Axmed loo magacaabay inuu noqdo Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Shibis, halka Degmada Boondheere loo magacaabay Wakiil Cabdalla.
Saraakiishaan cusub, ayaa xilalka kala wareegay Saraakiil horay u maamulaysay labadan Saldhig, kuwaasi oo hadda shaqada ay kala wareegeen rag dhalinyaro ah.
Booliska Somaliya ayaa dhiiragelin waxa ay u sameynayaan dhalinyarada cusub ee ku soo biirtay shaqada ciidamada Booliska, maadaama dhawaan la dhaariyay dhalinyaro badan oo tababar kala duwan oo ciidan qaatay.
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ballan qaaday in dhallinyarada waxbaratay loo dhiibayo talisyada Ciidamada kala duwan ee dalka.